ရင်ခုန်သံနည်းနည်းမြန်သည်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ရင်ခုန်သံနည်းနည်းမြန်သည်…။
Posted by naywoon ni on Mar 31, 2012 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 14 comments
မနက်ဖြန် ....ဧပြီ ၁
နေ၀န်းနီတို့က သူများ စကားလုံးယူသုံးပြီးခပ်တည်တည် ဖြီးတော့မယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့….။ စကားလုံး အသစ် ဆန်းသစ်ချိန်မရလို့ လူသိများပြီးသားစကားလုံးကိုပဲ ယူသုံးလိုက်မိတာပါ….။ စကားလုံးပိုင်ရှင်ဆရာကြီး ကိုလည်း ဒီနေရာကနေပဲ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်…။ ခွင့်မပြုလည်း ယူသုံးပြီးပြီ… ဖြစ်ပါတယ်….။ အဟင့် စိတ်ညစ်လိုက်တာ…။
ခေါင်းစဉ်တော့ ယူသုံးလိုက်ပါပြီ…။ ရင်ခုန်သံနည်းနည်းမြန်သည် …..တဲ့..။ အဲ နေ၀န်းနီတို့ အသက် 40 ကျော်မှ ရင်ခုန်နေတယ်ဆိုပြီး ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်တယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး…။ နေ၀န်းနီ ရင်ခုန်နေတာက အဲဒိနှလုံးသားကိစ္စ အတွက်ရင်ခုန်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ…။
မနက်ဖြန် ကိုယ်တိုင် မပါဝင် မဲပေးခွင့် မရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဘယ်လို အဖြေထွက်လာမလဲဆိုတာ တွေးနေရင်းနဲ့ ရင်ခုန်သံ က အချိန်နဲ့ အမျှ မြန်လာလို့ပါ….။ ကိုယ့်မျက်စေ့ ရှေ့မှာမဟုတ်တဲ့ ရာနှုန်းအနည်းငယ်လေး အတွက်သာလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မင်းနှယ် ဘာပြုလို့ ရင်ခုန်နေရသလဲ ဆိုတာ မမေးကြပါနဲ့…။ နေ၀န်းနီတို့ လူမျိုးက တစ်ခုခု အသစ်ပြောင်းလဲ ဖို့ အင်မတန် ၀န်လေးတတ်တဲ့ လူမျိုးဗျ….။ ဒါဖြင့်ရင် 1990 တုန်းကတော့ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ဘက်သတ်ဖြစ်သွားသလဲ လို့ မမေးနဲ့ဦး …။ အဲဒိတုန်းက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖြုတ်ချခံထားရတဲ့ ပါတီနဲ့ ယှဉ်ကရတာ…။ အာဏာရနေတဲ့ အဖွဲ့ အာဏာလက်ကိုင်ရှိတဲ့ အဖွဲ့မဟုတ်ဘူး….။ ပြိးတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရထားတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကလည်း ကျက်သေးတာမဟုတ်ဘူး…။ ခုလိုအခြေအနေ မျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘူး…။ ခုတော့ ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေက နားမသက်သာဘူး…။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုလုပ်နေတာ …။ ဘယ်နေရာမှာတော့ ဘယ်လိုညစ်လိုက်တာ…။ မဲဆွယ်ပွဲ တောင်မှ ဘယ်သင်းချိုင်းသွားလုပ်လုပ်လို့ ပြောတဲ့ သူတောင်းစားကပြော ….။ ရင်မောရပါဘိ…..။ ဒီလိုသာဆိုရင်….။ အင်း……နောက်နှစ်ဆယ်လေးနာရီဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲမှဲကို လက်ခံမဲ့ ပြောင်းလဲချင်စိတ်ရှိတဲ့ လူဦးရေ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီလဲ သိရတော့မယ်…။ 24 နာရီ……….. ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ရဦးမှာပေါ့လေ…………။
စိတ်တော့နဲနဲ အပူသားဗျ ၊ အားလုံးချင့်ချိန်တွေးမိပြန်တော့ အားတက်မိပါရဲ့။
အားလုံး ပြောင်းလဲ ချင်တဲ့ လူတွေ ချည်းပါပဲ ကိုနီရာ ။
ရင်ခုန်စွာ.နဲ့ စောင့်ပါမယ် ။
ကိုနေရေ ညီမကအိပ်မပျော်ဘူးနော် တရေးနိုးကျမှ ထကြည့်မယ် ဘာအဖြေထွက်တယ်ဆိုတာကို …..
တပ်ရင်းမှ စစ်သည်မိသားစုဝင်များကို တပ်မတော်အရာရှိများမှ NLD ကို မဲ မပေးရန်နှင့် မဲ ပေးမည်ဆိုလျှင် “နင်တို့ အဖေတွေ၊ ယောက်ျားတွေ အလုပ်ပြုတ်သွားချင်လား၊ NLD က နင်တို့ကို ဘာလုပ်ပေးမှာမို့လို့လဲ” စသဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ နေပြည်တော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ပုဗ္ဗသီရိ တပ်နယ်အတွင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ မှာ နံနက် ၆း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၆း၀၀ နာရီ အထိ တပ်ပြင်ပသို့ ထွက်ခွာခွင့် ပိတ်ထားသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် ဝင်းကုန်းရွာမှာ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ရွာလုံးကျွတ် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ လူမင်း၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ ရဲတိုက်၊ ဝိုင်း၊ ချစ်သုဝေ၊ လင်းလင်း၊ မာရဇ္ဇ စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက မဲပညာပေး စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်နဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းကို လာရောက်ဖျော်ဖြေနေချိန်မှာ တရွာလုံး သွားရောက် အားပေးနေစဉ် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရတဲ့ အဲ့ဒီရွာဟာ အိမ်ခြေ ၃၀၀ ကျော် လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပြီး တရွာလုံးနီးပါး မီးလောင်သွားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် ဝင်းကုန်းရွာဟာ အလောင်းတော်ကဿပ တောင်ခြေမှာ ရှိပြီးတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့အပြင် သောက်ရေသုံးရေ အလွန် ရှားပါးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပုလဲမြို့က မီးသတ်ကားတွေ လာရောက် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပေမဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ငြှိမ်းသတ်ဖို့ အခက်အခဲတွေ အများအပြား ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး တရွာလုံးနီးပါး လောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကနေ စတင် လောင်ကျွမ်းတယ် ဆိုတာကိုတော့ စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပြီး မီးဘေးသင့်ပြည်သူတွေ အတွက် အကူအညီတွေ လိုအပ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများပါ ကြံ့ဖွံ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ပါဝင်မဲဆွယ်
၂၀၁၂ မတ်လ၂၉ ရက်နေ့နံနက် ကိုးနာရီ ခန့်က နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးသန်းအောင် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် အုပ်ချူပ်ရေးမူး ဦးဝေလွင်ဖြိုး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူး ဦးရွှေမန်း တို့မှ
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ကြံခိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမောင်ရှိန် အတွက် အစည်းအဝေး
ရွာမအုပ်စု ရွာမရပ် အ.ထ.က(၁၉)ကျောင်းမှာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် ဦးသန်းအောင်မှ အ.ထ.က(၁၉) နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်
ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကျပ်သိန်းလေးရာ ချပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်း ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်
ဦးမောင်ရှိန်အား မဲပေးရန် မဲဆွယ်စည်းရုံး ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ မူလကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး
ကော်မတီဝင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုပဲ ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဟု
အစားထိုးထားသော (ကော်မတီအတု) ရပ်ကျေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးစိုးနိုင်
(ကြံခိုင်ရေးစည်းရုံးရေးမူး) ဦးလှအောင် ဦးမောင်မောင်(တောင်ကျောင်းစု) ဦးဟန်စိုး
(ကျားကူးအရှေ့ မူလတန်းကျောင်းအုပ်) တို့ဖြင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ ကြံခိုင်ရေး
ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာ မဲပေးရန် စည်းရုံးမဲစွယ်ပြီး ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်
မတီဝင်များဖြင့် ညှိနှိုင်းပီးစီးကြောင်း အစားထိုးကော်မတီဝင်များဖြင့် လုပ်ကြံအကွက်
မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမူး ဦးဝေလွင်ဖြိုးမှ ယခင်ချပေးသော ကျောင်းဆောင်လုပ်ရေးရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်းလေးရာမှ မည်မျှကျန်သေးကြောင်း ကျောင်းအုပ် ဦးခင်မောင်ကျော်အား
မေးမြန်းရာ (သိန်းခုနှစ်ဆယ် )ကျန်ကြေင်းပြောပါတယ်။
ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ အစစ် မှ စာရင်းရှင်းပီး လက်ကျန်ငွေမှာ (၉၇)
သိန်းကျော် ဖြစ်ပြီး တရားဝင် စာရင်းရှင်းလင်းကာ ကျောင်းအုပ်ဦးခင်မောင်ကျော်ထံ
အပ်နှံပြီး ဖြစ်သော်လည်း ငွေ(၂၇)သိန်းကျော် ကွာဟနေကြောင်း ထိုကိစ္စမှာ
ပြသာနာမဟုတ်ကြောင်း ဦးဝေလွင်ဖြိုးမှ ပြောကြားပြီး ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်
ကိုသာ မဲပေးလိုက်ပါ ဘာမှပြသာနာမရှိနိုင်ဟု ပြောကြားပြီး ရွှေးကောက်ပွဲဥပဒေ
များနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေဖြင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သော သူများမှ
ကြံခိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်ရှိန်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြောင်း
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှ ဒေသခံတဦးက သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
NLD ကို ထောက်ခံ အားပေးကြတဲ့ မြို့ ခံတွေကတော့ ဘယ်မြို. မှာမဆို မြို့ လုံးကျွတ်နီးပါး ထောက်ခံ ကြိုဆိုနေ ကြတာ အားရစရာကြီးပါ ။
ဒါပေမဲ့ ရလဒ်ထွက်လာ မှသာ အချေအနေ သေချာမှာပါ။ ဘယ်သူ ဆင် ကြံ ကြံ ပြီး ဘယ်လို မဟုတ်တရုတ် တွေ လုပ်ကြဦးမလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့် နေရတော့မှာပဲ။
ပခုက္ကူခရိုင်မြစ်ခြေမြို့ ရွာသာအေးရပ်ကွက်တွင် ပြည်သူများအား ကြံ့ဖွတ်မှ တစ်အိမ်ထောင်
၈၀၀၀၀ ကျပ်ကို နှစ်ကျပ်တိုးဖြင့် ချေးပြီးမဲဆွယ် ပြီး၎င်းရပ်ကွက်မှ ကြံ့ဖွတ်ကိုမဲပေးခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။ အများစုက NLD ဆိုပေမယ့် လူနည်းစုက ကြံ့ဖွတ် ပေးခဲ့ကြောင်းကြားသိရပါတယ်။
ရင်ပူရပါတယ်။ မသိနားမလည်သောပြည်သူတွေကိုနည်းမျိုးစုံဖြင့် စည်းရုံးနေကြပါတယ်။
တရားမျှတမှု လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဖယောင်းသုတ်ထားတာတွေလည်း ဖတ်နေကြားနေရပါတယ်။
ကော့မှူး မှာလုံးဝ ရှုံး လို့မဖြစ်ပါ။ ကြိုတင်မဲကိုလည်းစိုးရိမ်မိပါတယ်။ အိမ်မှာထိုင်နေပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်လို့စိတ်ပျက်မိပါရဲ့။ မဲလည်းပေးလို့မရ သူများတွေကိုပဲလိုက်မေးရင်းရင်ခုန်နေရပါတယ်။ဓ
အားလုံးဆုတောင်းကြပါဦး။ ဆုတောင်းရုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်သတင်းနားစွင့်လျှက်
ဧပြီ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် (၄၀)ကျော်တွင် ရောက်ရှိနေသော Eleven Media Group မှ သတင်းထောက်များ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ဤနေရာတွင် မိနစ်အလိုက် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ စုစည်းဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup တွင်လည်း နောက်ဆုံးရသတင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
အဲဒိလိုပဲ စောင့်ရတဲ့ သူတွေကပိုပြီးပင်ပမ်းတယ်…။ တို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း 44 ယောက် ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ….။
ကျုပ်လဲ ရင်ခုန်နေတုန်းပဲဗျို့ 
ရွှေကြည် ဖတ်တုန်းက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ post ကိုမတွေ့လို့ ဒီ post
ထဲမှာ ရေးမိတာ home page ကိုပြန်သွားတော့မှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ post ကိုတွေ့လို့ comment ကို copy လုပ်တင်လိုက်တာ။
ဦးလေး ကလည်း အသတ်40ပြည့်ရင် ရင်မခုန်ရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလည်း
ဦးနေ၀န်းကြီး ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ရင်အေးသွားပေမဲ့ame ကြောင့်တော့ ရင်ပြန်ခုန်တောမယ်ထင်တယ် …………. :grin: